सेयर लगानीकर्ता संघहरु किन र केका लागि ? - hamro Desh
सेयर लगानीकर्ता संघहरु किन र केका लागि ?
नेपालमा ०४६ सालको जनआन्दोलनपछि पुनस्र्थापना भएको बहुदलीय प्रजातान्त्रिक व्यवस्थामा पेसा व्यवसाय वा र विभिन्न संघ–संस्थाहरु भएपछि सेयरबजारमा लगानीकर्ताहरुको पनि संघहरु हुने नै भए । सेयरबजारका लगानीकर्ताहरुको पनि विभिन्न नामधारी सेयर लगानीकर्ताहरुको संघहरु छन् । नेपाल इन्भेष्टमेण्ट फोरम नेपाल व्यवसाय गर्नेहरुले पनि आ–आफ्ना पेसागत हक–हित र अधिकारका लागि भनेर संघ–संस्थाहरु खोल्न सक्ने भए । यसपछि नेपालमा संघ–संस्थाहरु खोल्नेहरुको बाढी नै आएभन्दा पनि हुन्छ ।
नेपालमा फुटपाथ व्यवसायदेखि कर्पोरेट कम्पनीहरुको समेत संघ–संस्थाहरु भए । सेयर लगानीकर्ता र संघ सेयर लगानीकर्ता दबाब समूह तथा नेपाल सेयर होल्डर एसोसिएसन आदि संघहरु छन् । यसमा कतिपय संघहरु सक्रिय छन् भने कतिपय संघहरु निष्क्रिय पनि छन् । यसमा अल नेपाल सेयर होल्डर एसोसिएसन संस्था निष्क्रिय नै छभन्दा फरक नपर्ला । यति धेरै सेयर लगानीकर्ताहरुको संघ भए पनि यिनीहरुले आम लगानीकर्ताहरुलाई समेट्न सकेका छैनन् ।
पछिल्लो पटक स्थापना भएको सेयर लगानीकर्ताहरुको संघ सेयर लगानीकर्ता दबाब समूहले पछिल्ला पटक नेप्से अगाडि अनसन बस्यो तर जम्मा–जम्मी २०/२५ जना सेयर लगानीकर्ताहरु मात्र उपस्थिति थिए । यसले पनि देखाउँछ कि सेयर लगानीकर्ताहरुको हक–हित र अधिकारको लागि स्थापना भएका संघहरु भने पनि आम लगानीकर्ताहरुलाई समेट्न सकेका छैनन् भने आम लगानीकर्ताहरुका लागि काम गर्ने भनिए पनि विधमान सेयर लगानीकर्ताहरु एक आपसमा हातेमालो गरी अगाडि बढेको देखिएन । एक संघले अगाडि सारेको कार्यक्रमलाई अर्को संघले सहभागिता जनाएको वा समर्थन गरेको देखिँदैन ।
पछिल्लो समयमा देशमा लगानीकर्ताहरुको सम्मेलन भइरहेको बेला एउटा संघ सेयर लगानीकर्ता दबाब समूहले आफ्ना ३२ सूत्रीय माग राखी आन्दोलन गरिरहँदा अर्को सेयर लगानीकर्ताहरुको संघ भने लगानी सम्मेलनमा सहभागी भइरहेको देखिन्छ । सेयर लगानीकर्ता दबाब समूहको आन्दोलन सेयर लगानीकर्ताहरुको हितमा थिएनन् त ! कतै सेयर लगानीकर्ताहरुको संघहरु पनि राजनीतिक संघ–संस्थाहरुको जस्तो त होइन ? लगानीकर्ताहरुको हक–हित र अधिकारभन्दा पनि आ–आफ्ना स्वार्थ पूर्तिका लागि मात्र त थिए त ।
सेयर लगानीकर्ताहरुको आन्दोलनमा अर्थमन्त्री डा. खतिवडाको राजीनामा माग्नमा पनि कतै राजनीतिक स्वार्थबाट प्रेरित त होइन भनेर पनि चर्चाहरु चलेको थियो । तर विद्यमान अवस्थामा अर्थमन्त्रीको राजीनामा मागेर मात्र पनि सेयरबजारले गति लिने होइन भनेर पनि चर्चा चलेको थियो सेयर बजारमा । देशमा १५ लाखभन्दा बढी सेयर लगानीकताहरु छन् । १५ लाख लगानीकर्ताहरुमा पनि सक्रिय लगानीकर्ताहरु के–कति छन् भनेर पनि बेला–बेला चर्चाहरु भइरहने गर्दछ ।
१५ लाख लगानीकर्ताहरु रहेको सेयरबजारको लागि ५/६ वटा सेयर लगानीकताहरुको संघ नै रहेका छन् । सेयर लगानीकर्ताहरुको संघ भनेर स्थापन भएका धेरैजसो संघहरुमा सीमित लगानीकर्ताहरु मात्र सदस्यहरु छन् । त्यसोत केही सेयर लगानीकर्ताहरुको संघलाई केही मिलिनियन सेयर लगानीकर्ताहरुको मात्र संघ हो भनेर पनि भन्ने गरेका छन् । यिनीहरुले आम लगानीकर्ताहरुका लागि भन्दा पनि आ–आफ्ना स्वार्थका लागि मात्र कामहरु गरिरहेका छन् भनेर पनि चर्चाहरु नचलेको होइन ।
केही लगानीकर्ताहरुको संघले सीमित सेयर लगानीकर्ताहरुको समूह बनाएर सेयर लगानीकर्ताहरुको संघ स्थापना गरेको पनि बताउँछन् सरोकारवालाहरु । त्यसोत केही सेयर लगानीकर्ताहरुको संघको गतिविधिलाई हेर्दा यसलाई होइन भन्ने ठाउँ नरहेको पनि सरोकारवालाहरुले भन्ने गरेका छन् । सेयर लगानीकर्ताहरुको संघले लगानीकर्ताहरुको हक–हित र अधिकार र सेयरबजारको सुधारका लागि भनेर अनशन र आमरण अनशन र नियामक निकायहरुमा तालाबन्दी गर्ने गर्दा पनि सबै सेयर लगानीकर्ताहरुले सहभागिता ऐक्यताबद्ध जनाएको देखिएन ।
सेयरबजारको विस्तार र सुधारका लागि आम लगानीकर्ताहरुको लागि भनेर गरेका आन्दोलनमा सबै सेयर लगानीकर्ताहरुको संघ र सबै लगानीकताहरुको सहयोग र समर्थन हुनुपर्नेमा त्यस्तो भने देखिएको थिएन । सेयरबजारमा आम लगानीकर्ताहरुका विभिन्न समस्याहरु छन् तर सेयर लगानीकर्ताहरुको संघहरुले आम लगानीकर्ताहरुको समस्यालाई भने त्यति समाधान गर्ने गरेको पाइएको छैनभन्दा पनि फरक नपर्ला । अर्कोतर्फ सेयर बजारमा धेरै बेथितिहरु छन् सेयरबजारका नियमन निकायहरले बाध्यात्मक रुपमा आफ्नो नीति–नियमहरु लाद्ने गरिरहेका छन् ।
कहिले बैंक तथा वित्त कम्पनीहरुलाई पुँजी वृद्धिको निर्देशन दिएर कहिले भ्याटले तर्साएर, कहिले लाभ करले सेयर लगानीकर्ताको टाउकोमा बजारेर त कहिले प्यानको भुतले तर्साएर नियामक निकायहरले सेयरबजारमा असर गर्नै गरिरहेका छन । अर्थमन्त्री डा. खतिवडाको सेयरबजारप्रति सकारात्मक नभएकाले अर्थमन्त्रीको राजीनामा माग्न परेको पनि सरोकारवालाहरुको भनाइ रहेको पनि छ । सेयरबजारलाई व्यवस्थित, विकास विस्तार र सुधारका लागि सम्पूर्ण सेयर लगानीकर्ताहरु लाग्नुपर्ने देखिन्छ । (आर्थिक दैनिकबाट)
किशोरावस्थाको अवस्था र स्थिति
बढ्दो हवाई दुर्घटनाको कारण